Cingisisa NgeeNtsikelelo - NguMongameli Thomas S. Monson
NguMongameli Thomas S. Monson
UBawo wethu waseZulwini uyazazi iintsikelelo zethu kwaye uyakusinceda xa simbiza sicela Kuye uncedo.
Bazalwane noodade abathandekayo, lekomfa icacisa iminyaka eyi-49 ukusukela ekusekweni kwam, ngoOkhthobha 4, 1963, njengelungu leQumrhu LabaLishumi Elinesibini. Iminyaka engamashumi amane anesithoba lixesha elide. Ngeendlela ezininzi, kodwa, ixesha libonakala lincinane ukusukela kwelaxesha Ndandime epulpitini kwiThebinekile, kwaye Ndanika intetho yam yokuqala kwikomfa yajikelele.
Okuninzi kutshintshile ukusukela ngoOkhthobha 4, 1963. Siphila kwixesha elikhethekileyo kwimbali yehlabathi. Sisikelelwe ngokuninzi. Kwaye ngamanye amaxesha kunzima ukubona iingxaki nokukhululeka okusingqongileyo kwaye singathyafi. Ndifumanise ukuba, kunokuba sibe siqwalasela okubi, sinokukhe sithi xha sibuye umva kwaye sicingisise ngeentsikelelo ezisebomini bethu, kunye nezingathi zincinci, esingaziboniyo ngamanye amaxesha, singafumana ulonwabo olukhulu kakhulu.
Ekukhumbuleni kwam le minyaka igqithileyo iyi49, Ndiye ndafumanisa izinto ezithile. Okunye kukuba amava angabalekileyo ngenxa yobuninzi bawo ayingawo lawo endingaqonda ukuba yimimangaliso. Ngenyaniso, ngexesha lokwenzeka kwawo, ayedla ngokubonakala ingathi yimimangaliso kwaye aqhelekile nokuqheleka. Kodwa kwakhona, xa ndibukisisa kakuhle, la mava abutyebisa kwaye asikelela iimpilo – ingakumbi eyam impilo ngaphantsi kwazo zonke. Ndikucebisa ukuba nawe wenze le nkqubo – ukuba, ujongisise ubomi bakho kwaye ukhangele iintsikelelo, ezinkulu nezincinci, ozamkeleyo.
Okuye kwabethelelwa ngomonde ngexesha ndizikhumbuza ibe lulwazi lwam lokuba imithandazo iyaviwa kwaye iyaphendulwa. Siyiqhelile laa nyaniso ifumaneka ku 2 Nifayi kwincwadi kaMormoni: Abantu bakho, ukuze babenoyolo.” 1 Ndiyangqina ukuba uyolo oluninzi luza xa siqaphela ukuba siyakwazi ukuthetha noBawo wethu waseZulwini ngomthandazo kwaye loo mithandazo iyakuviwa kwaye iphendulwe – mhlawumbi hayi ukuba njanikwaye xa silindele ukuba iyakuphendulwa, kodwa yona iya kuphendulwa kwaye nguBawo waseZulwini owaziyo kwaye osithandayo ngokugqibeleleyo kwaye osinqwenelela ulonwabo lwethu. Akasithembisanga na, “Thobekani; kwaye INkosi uThixo uyakunikhokela ngesandla, kwaye aninike iimpendulo kwimithandazo yenu”? 2
Kule mizuzu imbalwa endiyinikiweyo, Ndingathanda ukwabelana nani nje icuntsu lamava Endibenayo ndisemithandazweni yaviwa kwaye yaphendulwa kwaye eye, xa ndiyifundisisa, izise iintsikelelo ebomini bam nasebomini babanye. Ijenali yam yangemihla ngemihla, egciniweyo ngayo yonke le minyaka, indincedile yandinika izinto ezicacileyo engendingakwazanga ukuzikhumbula ndizibale.
Ekuqaleni kuka1965, Ndandinikwe umsebenzi wokuba ndiye kwiikomfa zengingqi ezizintloko kwaye ndibambe ezinye iintlanganiso kuMzantsi wePasifiki. Yayilundwendwelo lwam lokuqala olu lwakwamanye amazwe ehlabathi, kwaye yayilixesha elingasoze lilibaleke. Okuninzi komoya ngendalo kwenzeka ngelixesha lalo msebenzi ndandiwunikiwe njengoba ndandidibana neenkokheli, namalungu, kwaye nabefundisi.
Ngempela veki yangomgqibelo nangeCawa, Februwari 20 nange21, sasiseBrisbane, eAustraliya, siyokubamba khona iinkonzo zeenkomfa zengingqi eyintloko yaseBrisbane. Ngeloxesha lwezoo ntlanganiso zangoMgqibelo, Ndaziswa kumongameli wengingqi ovela kwenye indawo ekufutshane apho. Kwathi xa Ndixhawula isandla sakhe, Ndaba nomvakalelo womoya onamandla wokuba kufuneka Ndithethe naye kwaye ndimnike iingcebiso, kengoko Ndamcela ukuba ahambe nam xa sisiya kwinkonzo yakusasa ngeCawa kusuku olulandelayo ukuze oku kuphumezwe.
KwiCawa elandelayo, saba nethuba lokundwendwela sobabini. Sancokola ngoxanduva lwakhe oluninzi njengomongameli wengingqi. Xa sasincokola, Ndava kunyanzelekile ukuba ndimnike iingcebiso ngomsebenzi wabafundisi beminyaka emini epheleleyo kwaye nokuba yena namalungu abo bangabanceda njani aba befundisi basengingqini yakhe. Emva koko Ndaye ndafumanisa ukuba le ndoda yayithandaza ukuba ifumane ingcebiso yoku. Kuye undwendwelo lwethu yayibubungqina obukhethekileyo bokuba imithandazo yakhe yaviwa kwaye yaphendulwa. Oku kwakungathi yintlanganiso eqhelekileyo kodwa mna Ndiqinisekile ukuba yayikhokelwe nguMoya kwaye yenza umahluko phaya kula ngingqi yobomi bakhe kwaye nasemsebenzini wakhe, ebomini bamalungu wakhe kwaye nasempumelelweni yabafundisi beminyaka emibini epheleleyo.
Bazalwane noodade, iinjingo zeeNkosi ziphumezwa xa simamela